​हिमालय फाइनान्स : पीडितले ११ करोड ४० लाख भुक्तानी पाउने
काठमाडौँ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले खारेजीमा परेको हिमालयन फाइनान्सको कर्जाको सुरक्षण गरिएको जनाएको छ । कुल एक हजार ८४३ जनाको कर्जा सुरक्षाका लागि निगमका तर्फबाट महाप्रबन्धक डा दण्डपाणि पौडेल,..
​सांग्रिला डेभ्लपमेन्ट बैंकको १० लाख कित्ता शेयर लिलाम विक्रीमा
काठमाडौं । कम्पनीहरुले बिक्रीमा राखेका हकप्रद शेयरमा आबेदन नपरी बाँकी रहेको शेयरहरु लिलाम गर्ने प्रक्रिया धमाधम सुरु भएको छ । सांग्रिला डेभ्लपमेन्ट बैंकले ठूलो परिमाणमा शेयर लिलाममा निकालेको छ । सांग्रिला..
​नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ११ अर्बको विकास ऋणपत्र जारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज ११ अर्बको ‘विकास ऋणपत्र २०८८’ जारी गरेको छ । वैशाख १७ गते गणना गरिने यो ऋणपत्रको समयावधि १५ वर्ष रहेको छ । यो ऋणपत्रको ब्याजदर..
​सिद्धार्थ बिकाश बैंकले ९ महिनामा साढे १९ करोड रुपैया कमायो
काठमाडौं । सिद्धार्थ बिकाश बैंकले तेर्स्रो त्रैमासको आर्थिक विवरण प्रकासित गरेको छ । बैंकले गतवर्ष भन्दा १ सय ११ प्रतिसतले आफ्नो खुद मुनाफा वृद्धि गरि १९ करोड ६२ लाख ७९..
​एभरेष्ट बैंक र मेटलाइफ नेपाल बिच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक र मेटलाइफ नेपाल बिच बैंकासुरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एके अहलुवालिया र मेटलाइफ नेपालको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एम अलाउदिन..
​‘आत्मनिर्भर नेपालको साथमा एनएमबि बैंक’ कर्पोरेट क्यामपेयन
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले ‘आत्मनिर्भर नेपालको साथमा एनएमबि बैंक’ भन्ने नाराका साथ आफ्नो कर्पोरेट क्यामपेयनको सुुरुआत गरेको छ। आत्मनिर्भर नेपालका लागि विभिन्न व्यक्ति, क्षेत्र र बैंकले पुर्याएको योगदानको कदर गर्नु र..
​नेपाल बैंकको नेपाल इन्स्योरेन्समा रहेको दश लाख कित्ता सेयर लिलाममा विक्री गर्दै
काठमाडौं । नेपाल बैंकले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको दश लाख ३१ हजार ६७४ कित्ता सेयर लिलाम बढाबढबाट विक्रि गर्ने भएको छ। बैंकले बिक्रीका लागि न्युनतम चार सय रुपैया मूल्य तोकेको..
मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापन नियन्त्रणबाहिर गएको छैन : गभर्नर नेपाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले भूकम्प, राजनीतिक संक्रमण र आपूर्ति व्यवधानको अवस्थामा पनि समष्टिगत् आर्थिक व्यवस्थापन नियन्त्रणबाहिर नगएको बताएका छन् । तत्कालीन व्यवधानले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको..
​ग्लोबल आइएमई बैंकले तेस्रो त्रैमासमा कमायो १ अर्ब माथि
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आईपुग्दा खुद मुनाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि गरी १ अर्ब ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ मुनाफा..
कृषि विकास बैंकको साधारण सभाबाट १५ प्रतिशत बोनश र ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनश शेयर तथा ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर दिने भनी गरेको प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भएको छ । मंगलबार सम्पन्न ९ औं वार्षिक..
​सेञ्चुरी बैंकको खुद मुनाफा ४२ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौ । सेञ्चुरी बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को तेस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफामा ४२ दशलमव ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी २३ करोड २४ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको..
रिलायबल माइक्रोफाइनान्सको खुद मुनाफा २ गुणाले वढायो
काठमाडौं । रिलायबल माइक्रोफाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को तेस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफा २ गुणाले बृद्धि गरी १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा संस्थाले जम्मा..
​पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंक मेगामा गाभियो, आजैबाट एकिकृत कारोबार
काठमाडौं । रुपन्देहीमा प्रधान कार्यालय रहेको पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले एकिकृत कारोबार थालेका छन्। सोमबार मर्ज भएका दुई बैंकले मंगलबारदेखि एकिकृत कारोबार सुरु गर्ने भएका छन्। पश्चिमाञ्चलका..
​नयाँ क्षेत्र खोजी लगानी गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई गभर्नरको सुझाव
बुटवल । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नयाँ क्षेत्रको खोजी गरेर लगानी गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतालाई..
पुराना तथा झुत्रा नोट चलनचल्तीमा नल्याउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नोटमा स्टीज नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको सफा नोट नीतिलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन परिपत्र जारी गर्दे..
मिसन डेभलपमेन्ट बैक अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जोडियो
काठमाडौं । मिसन डेभलपमेन्ट बैक नेपाल क्लियरिंग हाउसको अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सदस्य बनेको छ । बैंकले क्लियरिंग हाउससंग शुक्रबार अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सेवा सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर..
​सनराइज बैंकको क्यालेण्डरमा चित्रकारीता
काठमाडौं । सनराइज बैंकले बालबालिकाहरुको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न सहयोग पुग्ने हेतुले उनीहरुले बनाएका चित्रहरु समावेश नयाँ वर्ष २०७३ सालको क्यालेन्डर विमोचन गरेको छ । बैंकले अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको अंकुर पृष्ठमा प्रकाशित..
​मेगा र पश्चिमान्चलको मर्ज प्रक्रिया पुरा, एकिकृत कारोबार बैशाख १३ गतेबाट, कहिले खुल्छ शेयर कारोबार ?
काठमाडौं । मर्ज प्रक्रियाको पट्यारलाग्दो अबस्था पार गरेपछि मेगा बैंक र पश्चिमान्चल डेभ्लपमेन्ट बैंकले यही बैसाख १३ गतेदेखि मेगा बैंकको नाममा संयुक्त कारोबार थाल्ने भएका छन् । विगत १५ महिनादेखिको प्रक्रिया..
​ नविल बैंकको स्मार्ट बैंक सहित ग्राहक लक्षित ३ नयाँ योजना
काठमाडौं । नविल बैंकले तीनवटा नयाँ योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले ग्राहक लक्षित परिस्कृत सेवाहरु नबिल स्मार्ट बैंक, नबिल सेयर कर्जा र सेयर खाता सञ्चालन गरेको हो । बैंकका प्रमुख..
अमेरिकी डन एण्ड ड्राबस्टिट्र कम्पनीले संयुक्त लगानीमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी नेपालमा खोल्ने
काठमाडौं । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले बिहीबार धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी डन एण्ड ड्राबस्टिट्रको संयुक्त लगानीमा अर्को क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी खोल्न आवेदन दिइएको हो । नयाँ..
​गरिमा विकास बैंक र सुभेच्छा विकास बैंक एकआपसमा गाभिने
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक र सुभेच्छा विकास बैंक एकआपसमा गाभिने भएका छन् । दुवै बैंक एकआपसमा गाभिने भएसँगै बिहीबारबाट दुवै बैंकको सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको..
​ग्लोबल आइएमई बैंकको सम्पर्क कार्यालय भारतको नयाँदिल्लीमा खोल्यो
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पर्क र प्रतिनिधी कार्यालयको सुरुवात गरेको छ । यही वैशाख ८ गते बुधबारदेखि संचालनमा ल्याइएको सम्पर्क कार्यालयको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद..
​टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वीजिसन गर्ने
काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले कालिञ्चोक डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वीजिसन गर्ने भएको छ। यस सम्बन्धी समझदारी पत्रमा आज दुवै बैंकका अध्यक्षबीच हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी पत्रमा टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष प्रा डा..
​सिटिजन्स बैंकको मुनाफामा ५८ प्रतिशत वृद्धि, तेस्रो त्रैमासमा कमायो साढे ७२ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं, बैशाख ७ । सिटिजन्स बैंकले चालु आव २०७२-७३ को तेस्रो त्रैमासमा ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्षको भन्दा ५८ दशमलव ४२ प्रतिशतले वृद्धि..
​भारतबाट मोबाइलमार्फत एभरेष्ट बैंकमा पैसा पठाउन सकिने
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले भारतबाट मोबाइलमार्फत रकम पठाउन सकिने सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले आधुनिक बैंकिङलार्इ भित्र्याउने क्रममा मोबाइलमार्फत रकम पठाउने सेवा ल्याएको हो । भारतबाट पैसा पठाउन इच्छुक ग्राहकहरुले..
​गुहेश्वरी मर्चेन्टको ५० प्रतिशत हकप्रद दिने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्ने भएको छ । गतबर्षको मुनाफाबाट १५ प्रतिशत बोनश बाँडेको कम्पनीले बोनशपश्चातको चुक्ता पुँजीको पचास प्रतिशत हकप्रद..
तेस्रो त्रैमासमा फस्ट माइक्रोफाइनान्सले ३ करोड ८० लाख रुपैया कमायो
काठमाडौं । फस्ट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तेस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफा ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ । जुन गत वर्षको सोहि अवधिको..
सानिमा बैँक अब डिजिटल सिग्नेचर प्रणालीमा
काठमाडौं । सानिमा बैंक र नेपाल सर्टिफाईङ्ग कम्पनीबीच अनलाईन कारोबारका लागि डिजिटल सिग्नेचर प्रदान गर्ने सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपाल सर्टिफाईङ्ग कम्पनीका अध्यक्ष बिप्लब मान सिंह तथा सानिमा..
​रुपन्देहीमा कृषि विकास बैंकको अत्याधुनिक शाखा विस्तार
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले रुपन्देही जिल्लाको सौं फर्सा्टिकरमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकलाई आधुनिक प्रणालीमा जेड्दै उक्त स्थानमा अत्याधुनिक सेवा सहितको नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको बैंकले जनाएको..
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र एस रेमिटबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार सेञ्चुरी बैंक लिमिटेडका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट एस रेमिट्को भुक्तानी लिन सकिनेछ । यसतै एस रेमिटका सम्पूर्ण एजेन्टहरुबाट..
Results 1896: You are at page 38 of 64